Indawo yokufihla iholide engena ilanga - I-Airbnb
Indawo yokufihla iholide engena ilanga
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguPhillipa
Ngokusekelwe KWIINGXAKI ZEMPILO EZIQHUBEKAYO SICELA UKUBA ZONKE IINDWENDWE ZITHEMBISWE NGOKUPHELELEYO.
Chitha imali oyifumeneyo
ukuhlala ngaselunxwemeni loMzantsi olungenasiphazamiso. Lala kumculo we-surfing, vuka uye kwiintaka eziphakamileyo kwi-veranda. Eli khaya lentsapho elinemigangatho eyi-2 lilungele nabani na okhangela iholide ngaselunxwemeni kunye nazo zonke izinto ezenza uzive usekhaya.
Ukubhukisha ngoku kuvulwe iiholide zesikolo zeXmas. Jonga imimiselo:
Ezona ntsuku zimbalwa zinokuhlalwa ziyi-5 nge-22 ukuya kutsho nge-29 kaDisemba.
Ezona ntsuku zimbalwa zinokuhlalwa ziyi-3 ukuya kweziyi-26 zikaJanuwari Izilwanyana zasekhaya zamkelekile kuselithuba.
Amagumbi okulala ayi-2 phezulu zombini aneebhedi ezilala abantu ababini. Igumbi lokuhlambela elinye, indawo yokuhlala evulekileyo kuquka nekhitshi. Umnyango wangaphambili uvula kumgangatho oneendawo zokuhlala zangaphandle. Umgangatho osezantsi unegumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini nendawo yokulala elala abantu ababini negumbi lokuhlambela. Le ndawo ivula kwindawo engasemva yesamente nengca. Izinto zebhedi zazo zonke iibhedi ziza kunikezelwa njengeetawuli kodwa wamkelekile ukuza nezakho ukuba uziva uthambekele kakhulu. Ukupaka kwindlela yokungena kunye negumbi ngalinye leemoto ezongezelelekileyo.
4.61 out of 5 stars from 144 reviews
4.61 · Izimvo eziyi-144
Eli khaya likwiimitha eziyi-300 ukusuka eDalmeny Beach apho kukho indawo efanelekileyo kubo bonke ubudala ukuba bahlale phantsi okanye bahambe nje kuyo. Ikude nge-400m ukusuka kwi-IGA enezinto ezininzi, intlanzi esemagqabini kunye ne-chip/i-pizza cafe, indawo yokukhempisha kunye nebhayisekile ehamba ngaselunxwemeni ukuya eNarooma. Indlu ijikwe yindawo egciniweyo kwaye iveranda yindawo ethatha ilanga lasekuseni, umoya wolwandle wasemva kwemini kunye nesandi solwandle sokulala.
Umbuki zindwendwe ngu- Phillipa
Ukuba unqwenela ukubuza nayiphi na imibuzo eyongezelelekileyo, nceda uye ku-Airbnb ngqo okanye uqhagamshelane nam kule nombolo 0423256.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-5095